sahala tanteraka ny marika na amin’ny baoritra fonosana na amin’ny taratasim-panondroana ny fampiasana ny fanafody na ny soratra eo amin’ilay fanafody na ny fetra farany ampiasana azy nefa samy hafa ny vidiny. Avo efatra heny ny elanelan’ny vidim-panafody amin’ny farmasia nefa samy eto an-drenivohitra. Mila mampitaha ihany raha tsy tena maika.
“Adrenaline” iray vidiana 9 000 ariary amin’ny faritra Andravoahangy, midina 3 900 ariary eny Mahavoky Besarety, 5 000 ariary mahery izany amin’ny hopitaly lehibe, kanefa 2 300 ariary eny Behoririka sy Antanimena. Samy eo Antanimena ihany dia misy mivarotra 4 000 ariary nefa 100m ny elanelany amin’itsy farany. Tsy entina hanalana baraka farmasia sanatria fa mba hitsinjovana ny olom-pirenena. Raha mandray andraikitra moa ny holafitra vao mainka tsara.
Ekena fa ambony ny fahasalamana sy ny aina noho ny vola, saingy mila mandanjalanja mampitaha ihany. Rehefa manana ny marary izay mantsy amin’ny maha vonjy aina azy dia tsy misy fotoana hivezivezena fa izay mpivaro-panafody misy no idirana. Amin’ny fotoana mahasalama indray tsy mieritreritra ny hampitaha vidim-panafody. Izao fanadihadiana lalina izao dia heverina fa mety hahasoa ny vahoaka Malagasy.